युनाईटेड इन्स्योरेन्सको कूल बीमा शुल्क आर्जन झण्डै ५० करोड, नाफा र बीमा कोषमा कति ? – Insurance Khabar
(Oct 16, 2021)
युनाईटेड इन्स्योरेन्सको कूल बीमा शुल्क आर्जन झण्डै ५० करोड, नाफा र बीमा कोषमा कति ?
प्रकाशित मिति : ३२ श्रावण २०७६, शनिबार ०८:४८
काठमाडौं । युनाइटेड इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७५।७६को चौथो त्रैमासमा झण्डै ५० करोड रुपैयाँ कूल बीमा शुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ । आज प्रकाशित कम्पनीको वित्तीय विवरणमा आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को चौथो त्रैमाससम्म आइपुग्दा ९ करोड २१ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । अघिल्लो आर्थिक सोही अवधिमा कम्पनीले १५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कम्पनीको नाफा ४२ प्रतिशतले घटेको हो । यद्यपि बीमा कम्पनीहरुको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कनमा मुनाफा भने हेरफेर हुन सक्नेछ ।
आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को चौथो त्रैमाससम्ममा कम्पनीको बीमा कोषमा ३२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले बीमा कोषमा २९ करोड ४० लाख रुपैयाँ रकम रहेको थियो । गत आर्थिक वर्षकधो सोही अवधिको तुलनामा कम्पनीको बीमा कोषमा ११ प्रतिशतले बढाएको हो ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को चौथो त्रैमाससम्ममा आइपुग्दा कम्पनीकोे जगेडा कोषमा १०३ प्रतशतले सञ्चिती बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को चौथो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले छ करोड रुपैयाँ सञ्चिती गरेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा दुई करोड ९७ रुपैयाँ मात्र सञ्चिती गरेको छ ।
खुद बीमा शुल्क आर्जन
त्यसैगरी कम्पनीको खुद बीमा शुल्क आर्जन पनि १३ प्रतिशतले घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को चौथो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले २४ करोड ५८ लाख रुपैयाँमा बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधमा कम्पनीले २८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो ।
कूल बीमा शुल्क आर्जन
कम्पनीले गत आबमा कूल बीमा शुल्क बापत ४८ करोड ७८ लाख ८० हजार रुपैयाँ कूल बीमा शुल्क बापत आम्दानी गरेको छ । समिक्षा अवधीको अधिल्लो आवमा कम्पनीले ४७ करोड ७४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ कूल बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो ।
खुद दाबी भुक्तानी
आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को १२ महिनाको अवधिसम्म आइपुग्दा कम्पनीले १८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको खुद दाबी भुक्तानी गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कम्पनीको खुद दाबी भुक्तानी भने ३२ प्रतिशतले घटेको हो । दाबी भुक्तानी हुन बाँकी रकम भने २४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३० करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले चुक्ता पुँजी एक अर्ब पुर्याउन भदौं ३ गतेदेखि २४० प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्दैछ ।
प्रतिसेयर आम्दानी ३० रुपैयाँ ४६ पैसा रहेको छ । प्रति शेयर नेटवर्थ भने दुई सय ३० रुपैयाँ १५ पैसा रहेको छ । मुल्य आम्दान िअनुपात २७ रुपैयाँ ९१ पैसा रहेको छ । त्यस्तै, प्रति शेयर कुल सम्पतिको मुल्य ४ सय २४ रुपैयाँ ०९ पैसा रहेको छ ।
सन् २०२५ सम्ममा फाइब जी प्रयोगकर्ता २ अर्ब नाघ्ने: अनुसन्धान
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई उपहार दिन नपाउने
विश्वमा आजः इटालीका किर्तिमानी आरोही मेस्नरको लोत्से हिमाल आरोहणदेखि चीनको पहिलो आणविक परीक्षण
‘स्वस्थ भविष्यको लागि सुरक्षित खाना’ भन्ने नाराकासाथ आज विश्व खाद्य दिवस मनाइँदै
४० कम्पनीले घोषणा गरे लाभांश, कसको कति (सूचिसहित)
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको लाभांश परिमार्जन,अब बोनश पनि दिने
मोबाइलबाटै बीमा गर्ने सुविधा नेपालमा कहिलेबाट ?
बीमा बचत र लगानी दुबै हो,यस्ता छन् जीवन बीमा गर्नैपर्ने १० महत्वपुर्ण कारण
महिला लघुवित्तको सुरुमै ५० प्रतिशत लाभांश घोषणा, आइपिओ बिक्री नगर्ने मालामाल
दुई बाणिज्य र दुई बिकास बैंकले बोलाए साधारणसभा